Jubbaland iiyo Puntland oo soo magacaabey xubnihii gudiga doorashooyinka ee laga rabay | Radio Hormuud
Jubbaland iiyo Puntland oo soo magacaabey xubnihii gudiga doorashooyinka ee laga rabay
Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa noqday maamuladii u horeeyay ee soo magacaabay xubnihii guddiyada doorashada, maalmo un kadib markii magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskii doorashada.
Tallaabada ay qaadeen labada madaxweyne ayaa noqoneysa mid meesha ka saareysa eedeyntii Farmaajo ee aheyd in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay diidan-yihiin in dalka uu aado doorasho.
Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa noqonaya maamuladii u horeeyay ee soo magacaaba xubnaha guddiyada doorashada, ayada oo ilaa hadda aysna xubnahooda soo gudbin maamulada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed.
Saddexda dowlad goboleed ee ilaa hadda aan soo gudbin Guddiga ku matalaya doorashada, ayaa waxaa xusid mudan inay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee soo magacaabay Guddiyadii muranka ka dhashay kaddib saxiixi 17-ka September 2020-ka.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa in guddiyadooda ay soo magacaabi waayan saddexdaan dowlad goboleed, hase yeeshe waxaa soo baxaya warar hoose oo sheegaya inuu weli taagan yahay is-jiid-jiid cusub.